११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ११:३४
मोटोपनको समस्याले धेरै मानिसलाई सताएको छ । अझ पेट लाग्ने समस्याले धेरै मानिसलाई हैरान बनाएको छ । कागती पानी दिनको सुरुवात दिनको सुरुवात कागती पानीबाट गर्नुहोस् । पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसो कम गर्न यो घरेलु उपाय प्रभावकारी हुन्छ । तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान सेवन गर्नुहोस्.....
१० कार्तिक २०७८, बुधबार ११:३९
काठमाडौँ– महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ। किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ । नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा यौ;न स;म्पर्क, वी;र्य.....
स्वस्थ तन र मनका लागि मीठो र गहिरो निद्रा अपरिहार्य मानिन्छ । पर्याप्त निदाइएन भने डायबेटिज, डि’प्रेसनजस्ता रोग लाग्नुको साथै वजन बढ्ने समस्या देखापर्न सक्छ । त्यसैले मीठो निद्राका लागि यसो गर्नुहोस्। निद्रा नपर्नुको का’रण असुविधाजनक ओछ्यान पनि हुन सक्छ । असुविधाजनक ओछ्यानले श’रीर दुख्ने समस्या पनि.....
८ कार्तिक २०७८, सोमबार १०:०१
काठमाडौं । यौन जीवन कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। इमोसनका साथै जोडीबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्छ। तर, यसको असर यसैमा अन्त्य हुँदैन। यौन सम्बन्ध सुरु गरेपछि युवतीहरूको शरीरमा केही परिवर्तन देखिन्छ। हर्मोनमा परिवर्तन सेक्सपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको शरीरमा अक्सिटोसिन र डोपामाइन.....
८ कार्तिक २०७८, सोमबार ०३:०९
१. इन्द्रायणी बीउलाई पानमा मिलाएर खानाले वा गौमुखी फूलको चूर्णलार्ई सख्खरसँग मिलाएर नियमित से’वन गर्नाले वा घिउमा मह मिलाएर खानाले बी’ ‘र्य श’क्ति बढ्दछ । २. तित्रीको बीउलाई हल्का कुटी रातभरी पानीमा भिजाई बिहान खाली पेटमा नियमित खानाले वा वरको दानालाई छायामा सुकाएर पिसी १ चम्चा धूलोलाई गाईको दूधमा मिलाई.....
२ वर्षअघि ब’न्ध्या’करण गरिसकेका श्रीमानलाइ श्रीमतीले ‘ग’र्भवती छु’ भनेपछि…
७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०९:२०
काठमाडौं। एक व्यक्तिलाई उनकी पत्नीले आफू ग’र्भवती भएको जानकारी दिएपछि उनी झ’स्किए । यस्तो यसकारण भयो किनकि ती पुरुषले २ वर्षअघि स्थायी ब’न्ध्या’करण भ्या’से’क्टो’मी गराइसकेका थिए । यो घटनापछि उनले स’ल्लाहको लागि सामाजिक प’राशर्म सा’इट रे’डिटको स’हारा लिएका छन् । डेली स्टारका अनुसार यी व्यक्तिले.....
होशियार ! धेरै वि,र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ..
६ कार्तिक २०७८, शनिबार ०६:३७
वी, र्य खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय समाजको मान्यता भएकाले धेरै शक्ति खेर जान्छ भन्ने सोच छ, तर त्यसमा सत्यता छैन। वी, र्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शु, क्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ। सां, केतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बी, जका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व.....
१ कार्तिक २०७८, सोमबार ०८:२८
नेपालीमा छोरी भन्दा आमा त’रुनी भन्ने भनाई खुबै चर्चित छ । यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । मानिसहरु नाता सम्बन्धलाई एकातिर राखेर सम्बन्धको भूमिका निभाउन बिर्सिन थालेका छन । कहिले छोराको बिहे हुनै लाग्दा सम्धिले सम्धिनी भगाउछन त कहिले सासु ज्वाई टिपेर फरार हुन्छिन । ढुक्क हुनुहोस यो घटना नेपालको भने.....
यस्ता समस्याबाट चिन्तित पुरुषहरुलाई यी ३ चिजको सेवनले गर्छ चिन्ता मुक्त साथै यति धरै फाइदा!
३१ आश्विन २०७८, आईतवार २३:२०
व्यस्त जीवनशैली र अव्यस्थित खान पानको कारण मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गरिरहेको छ। सही जीवनशैली नभएको कारण, केही व्यक्ति शारीरिक कमजोरीको शिकार हुन्छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार शरीरमा कमजोरीको समस्या बढ्ने बित्तिकै पुरुषहरूमा शुक्राणुको समस्या द्रुत रूपमा बढ्न थाल्छ। केही खराब बानीले.....
३१ आश्विन २०७८, आईतवार १३:०९
दम्पतिले चाहाँदा चाहाँदै पनि लामो समय सम्म बच्चा नहुने समस्यालाई बाझोपनाको संज्ञा दिईन्छ । हाम्रो समाजले विवाहको लामो समय सम्म पनि बच्चा जन्मिएन भने महिलालाई बाझी जस्ता अनेक लान्छना लागाउँने गर्दछन् । समाजले बच्चा नहुनुमा जहिले पनि महिलाकै समस्याको रुपमा लिन्छ । हाम्रो समाजले श्रीमान र श्रीमती कसको.....